Posted by ညီလင်းသစ် au 11.4.08
“အာရ်စီတူး၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်တက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်” ခေတ်ကဆို
ရင် ကျွန်မတို့ ထက်ကြီးမှာပေါ့နော်။ ကျွန်မက “ဗာတာ”ကအမျိုးအိမ်မှာ ၁၉၉၁ လောက်
ကနေဖူးတယ်။ ဗိုလ်တစ်ထောင်တက္ကသိုလ်နားကအဆောင်မှာတော့ ၁၉၉၈ လောက်က
နေဖူးတယ်။ လှည်းတန်းကအဆောင်တွေလည်းနေဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဲဒီနေရာတွေ
မှာလျှောက်သွားတိုင်း အကွဲစတစ်ခုခုပေါ်မှာလျှောက်နေရသလိုကို ကဗျာတွေဆန်ချင်နေခဲ့
တာဖြစ်မယ်။ “ပတ် ဝန်းကျင်နှင့် ကျနော့်နှလုံးသား တသားတည်းဖြစ်ခြင်း” ကြောင့်မမြင်ရပေမဲ့ အကွဲစတွေများစွာရှိနေတာတော့ခံစားမိပါတယ်။ ဒီစာဖတ်ပြီးရန်ကုန်
“ကွဲသွားသော ရဟန်းတစ်ပါး၏ ဦးခေါင်းထဲမှ အသိ၊အလိမ္မာ ယဉ်ကျေးမှုများသည် ခွဲသူကို မည်သို့အကျိုး ပြုသလဲ ” ဆိုရင်တော့ ခွဲသူအတွက်
အစ်မထက် အသက် ကြီးရင် ကျွန်တော့်ထက် ကြီးတာ သေချာ ပြီ :)
ဟား...ဒီတခါတော့ အသက်အကြောင်း ပြောရတော့ မယ်ထင်တယ်၊ ကျနော်သာ အနောက်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ မေးတဲ့ သူက ဒီအမျိုးသမီး အသက်ကြီးနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းပြီး ယဉ်ကျေးမှုအရ How old are you? လို့မေးမယ့်အစား How young are you? လို့ အမေးခံရမယ့် အရွယ်တော့ ရောက်နေပြီဗျ =)) .....
လကမ္ဘာပေါ်ကို အမေရိကန်အာကာသသူရဲကောင်း Neil Armstrong ခြေချပြီး ၆ နှစ်အကြာမှာ ကျနော်မွေးပါတယ်။
Love the way you answer your age.